မိဘများသည် ကလေးငယ် များ တရွေ့ရွေ့ကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှ ပက်လက် အနေ အထားမှာ မှောက်နိုင် အောင်၊ မှောက်ရာမှ လေးဘက်ထောက်၊ လေးဘက်သွားနိုင်အောင်၊ မတ်တတ်ရပ်နိုင်အောင် သင်ပေးရသည်။ အားပေးရသည်။ မတ်တပ်ရပ်နိုင်သည်နှင့် "ရပ် နိုင်ပေ . . . . ရပ်နိုင်ပေး " ဟု ဂုဏ်ပြုချီးကျူးရသည်. . . .
ရပ်နိုင်ပြီးနောက် လမ်းလျှောက်သင်ရသည်. . . စကားသင်ပေးရသည်. . . . " ပါ. . . မာ. . . . .ဖေ . . . . မေ" မိဘ၊ အဖေ၊ အမေ ကို ခေါ်တတ်အောင် သင်ပေးရသည်. . "ရေ. . . . ထိုင်. . . . ထ. . . ." တစ်လုံးချင်းသင်ပေးရသည်. . . . ထိုမှ နောက်တွင် စကားများပြောတတ်အောင် သင်ပေးရသည်. . . ပြောတတ်ဆိုတတ် ရှိလာသောအခါ ယဉ်ကျေးအမွေပေးရသည်. . .
"လူကြီးကို ကျော်ခွမသွားနဲ့" ၊ "လူကြီးရှေ့မှာ ခေါင်းငုံ့သွား"၊ "မိဦး ဖဦး မစားနဲ့"၊ "ထမင်းကို ပြတ်ပြတ်မြည်အောင်မစားနဲ့"၊ "ဟင်းကို လက်နဲ့မနှိုက်နဲ့"၊ "လမ်းလျှောက်ရင် ခြေသံမပြင်းစေနဲ့"၊ "လူကြီးရဲ့ အထက်ကမထိုင်နဲ့" စားစဉ်ယဉ်ကျေးမှု၊ သွားစဉ်ယဉ်ကျေးမှု၊ ထိုင်စဉ်ယဉ်ကျေးမှု၊ တို့ကို သင်ကြားပေးရသည်. .
မိဘတိုင်း မလွဲမသွေ ဆောင်ရွက်ဖြည့်စည်းပေးရမည့် တာဝန်များဖြစ်၏. . . . ဤနည်းဖြင့် သားသမီးများ စကားပြောတတ်၊ သွား၊ လာ၊ နေထိုင်နည်း တတ်မြောက်လာကြသည်. . . လက်ဦးဆရာဖြစ်သော မိဘတို့သင်ကြားသည့် ကျေးဇူးဖြစ်၏.. .
ပို၍သိတတ်လာသောအခါ "ဘုရားကို ဦးတော်လုပ်လိုက်"၊ "ဘုန်းကြီးကိုဦးတော်လုပ်လိုက် " ၊ "မိဘကို ကန်တော့လိုက်" ၊ "ပိုးကောင်လေးတွမသတ်နဲ့ " "ငယ်သူကို အနိုင်မကျင့်နဲ့" စသည်ဖြင့် ဘာသာယဉ်ကျေးမှု အမွေများကို ပေးရသည်. . .
မျက်နှာဘယ်လိုသစ်၊ သွားဘယ်လိုတိုက်၊ ရေဘယ်လိုချိုး၊ အ၀တ်ဘယ်လိုဝတ်၊ စသည့် လူမှုယဉ်ကျေး လိမ္မာအောင် သွန်သင်ပေးရသည်.. . . . . သိသင့်သိထိုက်သည်များကိလည်း နေ့စဉ်နှင့်အမျှ သင်ကြား ပေးရသည် . . . ထို့ကြောင့် "လက်ဦးဆရာမည်ထိုက်စွာ ပုဗ္ဗစရိယ မိနှင့်ဘ ဟု ဆိုကြ၏ "
မိဘတိုင်းသည် သားသမီးများကို မေတ္တာနှင့်သင်ပေးကြသည်. . စေတနာနှင့် သင်ပေးကြရသည်. . အသိနှင့်ယှဉ်၍ ယဉ်ကျေးလိမ္မာ အောင် သင်ပေးကြသည် . . သားသမီးများ တစ်သက်တာပြောဆို နေကြသော စကားများသည် မိဘသင်ပေးသော ဘာသာစကားအမွေဖြစ်သည်. . အသိလိမ္မာနှင့် ဘာသာအယူဝါဒ အဆုံးအများမှာလည်း မိဘတို့ထံမှ ရှေးဦးစွာသင်ကြားနာယူရသော ယဉ်ကျေးမှုအမွေများဖြစ်ပါ၏. . .
ရေးသားသူ poemflower at Monday, August 03, 2009
ဘုန်းတော်ကြီးလော August 3, 2009 at 8:41 PM
မပင်မပန်း သင်ပေးခဲ့တဲ့ မိဘကျေးဇူးကို သတိရတယ်
လောကမှာ အကျိုးရှိအောင်လဲ မိဘပဲ
သံသရာမှာ အကျိုးရှိအောင်လဲ မိဘ ပါနေတာပဲ ဆိုတာ ထင်ပေါ်စေပါတယ်
မြစ်ကျိုးအင်း August 3, 2009 at 10:20 PM
မိဘဆိုတာ လက်ဦးဆရာဖြစ်သလို အခုချိန်ထိလည်း သွန်သင်ဆုံးမနေဆဲပါပဲ...။
အနှိုင်းမဲ့တဲ့မေတ္တာတွေနဲ့ တသက်တာလုံး သွန်သင်ဆုံးမ ပြဲ့ပင်ပေးနေတာ မိဘတွေပါပဲ...။
မိုးစက်အိမ် August 3, 2009 at 10:26 PM
မှန်တယ်ဗျာ အရာအားလုံရဲ. လက်ဦးဆရာပါ
သင်ဆရာ မြင်းဆရာ ကြားဆရာ ဆိုတဲ.အရာတွေ
ကိုနားလည် တတ်သိအောင် လက်ဦးဆရာ မိနဲ.ဘ
က သင်ပေးလိုက်ကြတာပါ ...
Anonymous August 4, 2009 at 1:25 PM
ပြောချင်တာတွေ အများကြီးပဲ ဒါပေမဲ့ မပြောတော့ပါဘူးဗျာ...။ ဖတ်မှတ်ရုံပဲ လုပ်သွားတယ်။
kokomaung.uk August 7, 2009 at 12:37 AM
ဟုတ်ပါတယ်။ မိဘဆိုရာ ဘ၀ရဲ့  ဦးဆုံးဆရာသမားတွေပါဘဲ။ ဘယ်တော့မှလဲ မမေ့အပ်တဲ့ ကျေးဇူးရှင်ကြီးတွေဆိုလဲ မှန်တယ်။
မိဘကျေးဇူး၊ မြင်းမိုရ်အထူးသိလျက်၊ အဆပ်ခက်၏။ တဲ့။
ကျေးဇူးကိုသိ၊ သိပြီး ဆပ်။ ဒါမှ ကုသိုလ်လဲရ တာဝန်လဲ ထမ်းဆောင်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပေါ့။
ခုတစ်လောအဖြစ်အပျက်တွေက . . .